သင့်ရဲ့လိင်ဘဝအကျိုးသက်ရောက်လွန်း Porn အကဲခတ်နိုင်ပါသလား? Jenner ဆရာတော်, LMFT; Psychotherapist Shirani အမ် Pathak (2017) - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
သင့်ရဲ့လိင်ဘဝအကျိုးသက်ရောက်လွန်း Porn အကဲခတ်နိုင်ပါသလား? Jenner ဆရာတော်, LMFT; Psychotherapist Shirani အမ် Pathak (2017)
Kristine Fellizar (ခွငျးအားဖွငျ့ဆောင်းပါးလင့်ခ်)
ငါမဆိုလမ်းအတွက် porn ဆန့်ကျင်ဘူး။ တကယ်တော့ငါစိတ်လှုပ်ရှားစရာပေါ်လာသည့်အခါတိုင်းအတွက်သတ်မှတ်ထားသော bookmarked ဗီဒီယိုအနည်းငယ်ရွေးချယ်ထားရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ငါတကယ်မကြိုက်တာတစ်ခုက ဘယ်လောက်ပင်မ porn ကလူကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ် - အထူးသဖြင့်ငါအတိတ်ကာလနှင့်အတူချိတ်ဆက်င့်ယောက်ျားတွေ။ ငါ့အများစု မကောင်းတဲ့လိင်ပုံပြင်များ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများတွင်တွေ့မြင်ခဲ့ရာများမှသူတို့မျှော်လင့်ချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတ်မှတ်ထားသောယောက်ျားများကိုဗဟိုပြုလေ့ရှိသည်။ တိုတိုပြောရရင်ကျွန်တော့်အတွက်အမြဲတမ်းစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှုအသစ်တစ်ခုအရ၊
အမေရိကန်ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအသင်း၏နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတွင်လေ့လာမှုတစ်ခုအရကြည့်ရှုခြင်းကိုလေ့လာခဲ့သည် အလွန်အကျွံ porn သင့်ရဲ့လိင်ဘဝအပေါ်တစ်ဦးသေဆုံးသူယူနိုင်ပါသည်အထူးသဖြင့်သင်ဟာငယ်ရွယ်ပြီး၊
“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စားသုံးခြင်းကိုများသောအားဖြင့်တစ်ကိုယ်တော်လိင်မှုဖြင့်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်” Jenner ဆရာတော်, LMFT, CSAT-S ကစည်ကားနေသည် “ တစ်ကိုယ်တော်လိင်မှာတုံ့ပြန်မှုကွင်းဆက်တွေရှိနေတယ်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၏ဖိအား၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအမြန်နှုန်း - အားလုံးသည်တစ် ဦး ချင်းအပေါ်အဆင်ပြေမည့်အရာများနှင့်တိုင်းတာသည်။ ဒါကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမိမိကိုယ်မိမိနှိုးဆွပေးသည့်အလွန်ကောင်းသောတုံ့ပြန်မှုကွင်းဆက်နှင့်အတူပုံဖော်နိုင်သည့်အခါအခြားတကယ့်သက်ရှိ၊ အသား၊ အသွေးနှင့်လူတစ်ယောက်သည်သင်မည်ကဲ့သို့ထိတွေ့လိုသည်ကိုတိတိကျကျထိရန်ခက်ခဲသည်။
ထုတ်ဝေခဲ့သည့်အဆိုပါလေ့လာမှု, Urology ၏ဂျာနယ်ခဲသုတေသီဒေါက်တာမဿဲ Christman, ရေတပ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ San Diego မှအတွင်းရေးစင်တာနှင့် 312 နှင့် 20 နှစ်အရွယ်များ၏အသက်အရွယ်အကြား 40 ယောက်ျားစစ်တမ်းကောက်ယူသူကိုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူန်ထမ်းဆီးရောဂါပါရဂူများကကောက်ယူခဲ့သည်။ အားလုံးစစ်တမ်းသင်တန်းသားများကိုကုသမှုများအတွက် San Diego မှတစ်ဦး urology ဆေးခန်းသွားရောက်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှုကိုသာတွေ့ရှိရပေမယ့်လည်း ယောက်ျား၏သုံးရာခိုင်နှုန်းကိုသူတို့ masturbating ကြိုက်တတ်တဲ့ပြောပါ အမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံမှုအပေါ်ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်လျှင်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများအကြားကိန်းဂဏန်းအရသိသာထင်ရှားသောဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များဤတွင်
Porn မှုဦးစားပေးအဘယ်သူသည်အမျိုးသားများအတွက်သူတို့ရဲ့လိင်ဘဝပုံစံ မကျေနပ်. ခံရရဖို့ပိုပြီးဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်
၎င်းသည်လုံးဝအံ့သြစရာမဟုတ်ပေ။ သို့သော်လိင်မှုကိစ္စစိတ်ပျက်အားလျော့ခြင်းကိုအမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လိင်အရကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပိုနှစ်သက်သောစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သောအမျိုးသားများကတွေ့ရှိရသည်။ အထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသားများသည်လိင်မှုကိစ္စကိုမနှစ်သက်သောအပြင်ညစ်ညမ်းမှုကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ကိစ္စများနှင့်အတူယောက်ျား၏နံပါတ်သူတို့ကလောင် Porn ၏ပမာဏနှင့်အတူတက်
စစ်တမ်းအဆိုအရယောက်ျားလောက်လေးရာခိုင်နှုန်းကသူတို့ 11 ကြိမ်အပတ်ကထက် porn ကိုပိုမိုစောင့်ကြည့်ပြောကြပါတယ်။ သုံးဦးသာရာခိုင်နှုန်းကိုသူတို့လိင်ဆက်ဆံဖို့ porn ကြိုက်တတ်တဲ့လို့ပြောနေချိန်မှာသူတို့ထဲကအများစု (နီးပါး 80 ရာခိုင်နှုန်း), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များရှိခြင်းမှဝန်ခံခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှုန်းသူတို့ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုမပါဘဲလိင်ဆက်ဆံပိုမိုနှစ်သက်သူအမျိုးသားများအတွက်နိမ့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။
စာရေးသူမှတ်သားနေချိန်မှာငယ်ရွယ်သောအမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအလွန်နိမ့်ဖြစ်လေ့အကြောင်း, မကြာသေးမီကကိစ္စများတွင်တစ်ခုတိုးရှိခဲ့သည်။ သဘာဝကျကျ, ဤ porn-ကြည့်ရှုအလေ့အထအဘယ်ကြောင့်ရှင်းပြဖို့ကအဓိကဖြစ်မည်အကြောင်းကောက်ချက်ချရန်သူတို့ကိုလမ်းပြတော်မူ၏။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းကအဘယ်ကြောင့်အလုပ်မဖြစ်သောပြissuesနာများဖြစ်စေရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ“ သည်းခံစိတ်” ဖြစ်သည်။ အချို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ဆင်တူသည့်ပုံမှန်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသူများသည်၎င်းကိုကြည့်ရှုခြင်းမှမြင့်မားသည်။ သူတို့ဟာမျှော်လင့်ထားတာတွေနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အတွက်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာ့လုပ်ဆောင်မှုကိုသူတို့တုံ့ပြန်မှုနည်းသွားတယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကဖြန့်ချိဖို့အတွက် porn ကိုမှီခိုဖို့လိုတယ်။
Shirani အမ် Pathak, အများ၏လိုင်စင် psychotherapist နှင့်တည်ထောင်သူအဖြစ် ဆီလီကွန်ဗယ်လီ၏ဆက်ဆံရေးမျိုးရေးစင်တာ Bustle ကိုပြောတယ်၊ “ အမျိုးသမီးများစွာဟာသူတို့ရဲ့ယောက်ျားတွေကိုမဖယ်ရှားနိုင်တာကိုအစီရင်ခံကြပြီးအမျိုးသမီးတွေဟာမလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရပြီးသူတို့ရဲ့အမျိုးသားတွေကစိတ်ပျက်နေကြတယ်။ ဒါမှမဟုတ်အမျိုးသားတွေဟာစိုက်ထူမှုတစ်ခုကိုမရရှိနိုင်ကြဘူး၊ ဒါကြောင့်အမျိုးသားတွေကမလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရပြီးအမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသမီးတွေစိတ်ပျက်နေကြတယ်။ "Pathak ကပြောပါတယ်။ လိင်မှုကိစ္စနှင့်လိင်အကြောင်းလေ့လာခြင်းနှင့်အခြားသူများနှင့်ဆက်ဆံခြင်းကိုညစ်ညမ်းသောနည်းစနစ်အဖြစ်အသုံးပြုသောအခါ၎င်းသည်အမှန်တကယ်အကျိုးမရှိသောအခြေအနေဖြစ်သည်။ ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်သုံးလက်လှမ်းမီမှုတိုးလာတာကြောင့်ဒါဟာပုံမှန်ဖြစ်လာတာပိုများလာပါတယ်။ ”
အမျိုးသမီးများသည် porn အသုံးပြုခြင်းကိုအမျိုးသားများကဲ့သို့မခံစားရပါ
သူတို့ကောက်ယူတစ်ဦးကသီးခြားစမ်းသပ်မှုလည်းအမျိုးသမီးတွေသို့ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မည်ကဲ့သို့ porn ကြည့်ရှုသူတို့ကိုထိခိုက်ခဲ့သည်။ ယောက်ျားမတူဘဲ, porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြားမျှအရေးပါသောဆက်ဆံရေးမျိုးရှိ၏။
အမျိုးသမီးများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုနှင့်အတူကူညီရန်ခံစားချက်များနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုများအပေါ်မှီခိုလေ့ရှိပြီးအမျိုးသားများသည်အမြင်အာရုံဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုမှီခိုအားထားနေရခြင်းကြောင့်အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများနှင့်နှစ် ဦး ကဲ့သို့ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းမရှိသောကြောင့်ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ Pathak ကပြောတယ်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်အမျိုးသားများအနေဖြင့်အမျိုးသမီးများလိုချင်သည့်အမြင်အာရုံကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောအမြင်အာရုံကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောယောက်ျားသည်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကိုအမျိုးသားများနှစ်သက်စေရန်ရည်ရွယ်သည့်မင်းသမီးများအပေါ် အခြေခံ၍ မတိကျသောကိုယ်စားပြုမှုဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်မို့လို့ porn porn ကြည့်တာကမင်းရဲ့လိင်ဘဝကိုထိခိုက်နိုင်မလားလို့စဉ်းစားမိရင်၊ ယေဘုယျအားဖြင့်ဤလေ့လာမှုသည်အများဆုံးသတိပေးချက်တစ်ခုဖြစ်သည် ခေတ်မှီညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်အစစ်အမှန်ဘဝ၌လိင်နှင့်မတူပါ။ သင်ထင်လျှင်စိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည် - သင်၏လိင်ဘဝသည်လည်းထိခိုက်နိုင်ပုံရသည်။